10 ဥရောပရှိရှုခင်းသာဂေါက်ကွင်းအများစု | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဥရောပရှိရှုခင်းသာဂေါက်ကွင်းအများစု
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ
စိမ်းလန်းသောချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်တောင်တန်းများ, ကျယ်ပြန့်သောမြက်ခင်းပြင်များ, ဥရောပရဲ့အလှပဆုံးနေရာတွေမှာ, ဤ 10 ဥရောပရှိအလှဆုံးဂေါက်ကွင်းများ, ကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်းဂေါက်ကလပ်အချို့ဖြစ်သည်. ဂေါက်ကွင်းတိုင်းကိုပြီးပြည့်စုံစေရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်, အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအဆောက်အ ဦး များနှင့်သဘာဝအလှပေါင်းစပ်မှု.
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးအဆိုပါ Eco-Friendly Way ကိုရန်ခရီးသွား Is. ဤဆောင်းပါး Save ကိုတစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား, အဆိုပါ ဈေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်ဝက်ဘ်ဆိုက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ.
1. Brittany ရှိ Golf Blue Green Pleneuf-Val-Andre
ခမ်းနားထည်ဝါသောမြင်ကွင်းများဖြင့် အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြား, Bluegreen Pleneuf Val Andre ဂေါက်ကွင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်. Brittany ရှိ Bluegreen ဂေါက်ကွင်းသည်ဥရောပရှိအလှဆုံးဂေါက်ကွင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်.
စိမ်းလန်းစိုပြေသောစိမ်းလန်းသောလမ်းစဉ်သည် Breton ကမ်းရိုးတန်းကိုအပေါ်စီးမှမြင်နိုင်သည်, ပင်လယ်ပြာနှင့်စိမ်းလန်းသောမြေ၏ပေါင်းစပ်မှုသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, သင်တစ် ဦး မှကစားလိမ့်မည် 500 ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဂေါက်ကွင်းများ.
2. Scandinavian သင်တန်းအသစ်: ကိုပင်ဟေဂင်
25 ကိုပင်ဟေဂင်မှကီလိုမီတာ, New Course ဂေါက်ကွင်းသည်အဆင့်၌ရှိသည် 50 ဥရောပရှိထိပ်တန်းဂေါက်ကွင်းများနှစ်စဉ်. New Course 36-hole သည်ဥရောပရှိရှုခင်းအကောင်းဆုံးဂေါက်ကွင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် 25 ပတ်လည်သစ်တောဟက်တာ.
သဘာဝရေကန်များသို့စီးဆင်းသောစမ်းချောင်းများ, တိတ်ဆိတ်သောလှပသောအပြင်အဆင်, နှင့်ဆုရသစ်သားဂေါက်ကလပ်, ပထမပေါက်ဝဝင်ပေါက်ကနေမင်းကိုအံ့သြသွားလိမ့်မယ်. ရှုခင်းသည်တကယ့်ကိုလှပပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဂေါက်သမားများစွာကိုစွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်.
3. Castletown Golf Links များ: က Man ၏ကျွန်း
ပင်လယ်လေ, တောပန်းများ, နှင့် Isle of Man ၏မော်ကွန်းအမြင်များ, Castletown golf links course တွင်ဂေါက်ကစားခြင်းသည်မမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်. The Isle of Man သည်ဥရောပရှိရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, ဂေါက်ကွင်းသည်ဥရောပရှိအလှဆုံးဂေါက်ကွင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်.
မင်းအားလုံးကိုပင်လယ်ကဝိုင်းထားတယ်3နှစ်ဖက်, သင်လှပသော Langness ကျွန်းဆွယ်တွင်သင်သင်တန်းကစားနေစဉ်. ကျောက်ဆောင်ကမ်းခြေသည်ကမ်းခြေများဆန့်သည်, ဘုန်းကြီးသောနေဝင်ချိန်, ဗြိတိန်နှင့်အိုင်ယာလန်ရှိအထင်ရှားဆုံးဂေါက်ကွင်းများတွင် Castletown Golf Links ကိုအဆင့် ၈ တွင်သတ်မှတ်သည်. ၁၇ ပေါက်သည်အပေါက်ကိုအပေါ်စီးမှကြည့်သည် အိုင်ယာလန်ပင်လယ်, ၁၈ ပေါက်မှမြင်ကွင်း, သမိုင်းဝင် St.. Michaels လူ့ဂွစာ, 12ရာစုရာစုဘုရားရှိခိုးကျောင်း, အတွေ့အကြုံရှိဂေါက်ကစားသမားတိုင်းကိုအာရုံပျက်စေနိုင်သောအမြင်များ.
4. Tralee ဂေါက်ကလပ်: အိုင်ယာလန်
သဘာဝမြေပြင်တွင်သတ်မှတ်ပါ, အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်ကမ်းခြေကိုအပေါ်စီးမှကြည့်ပါ, အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိ Tralee ဂေါက်ကွင်းသည်ဥရောပရှိအထူးခြားဆုံးနှင့်သာယာလှပသောဂေါက်ကွင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. မင်းရှေ့ကနက်ပြာရောင်မြင်ကွင်းနဲ့စိမ်းလန်းတဲ့တောင်တန်းတွေကိုဖြတ်ပြီးတွင်းတွေကိုလိုက်ရှာလိမ့်မယ်.
ဤလှပသော ၁၈ ပေါက်ဂေါက်ကွင်းသည် County Kerry တွင်ရှိသည်, Dingle ကျွန်းဆွယ်၏အိမ်, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Killarney အမျိုးသားဥယျာဉ်. ဂေါက်ကွင်းကိုအနား၏အနားတွင်သတ်မှတ်ထားသည် အံ့မခန်းကမ်းရိုးတန်း, စိမ်းလန်းစိုပြည်သောအိုင်ယာလန်နှင့်အထင်ကရအနောက်တောင်အိုင်ယာလန်.
5. ဂေါက်ကလပ် Crans-Sur-Sierre: ဆွစ်ဇာလန်
အသက်အကြီးဆုံးတစ်ခု, ခေတ်မီသော်လည်းတပ်ဆင်ထားသည်, ဥရောပ၌ဂေါက်ကွင်းများ, ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Crans-sur-Sierre ဂေါက်ကွင်းသည်ဥရောပရှိအလှဆုံးဂေါက်ကလပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. သဘာဝရေကန်များ, တောင်များ, စိမ်းလန်းစိုပြေသောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံချိုင့်ဝှမ်းများသည်အံ့သြဖွယ်နှင့်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းများဖြစ်သည်.
ဤလှပသောဂေါက်ကွင်းသည် ဆွစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်း၌တည်၏, ထို့ကြောင့်ရှုခင်းသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်သည်. Mont Blanc နှင့် Matterhorn တို့၏ရှုခင်းများ, ဥရောပရဲ့အမြင့်ဆုံးနဲ့အလှဆုံးတောင်တွေ, သင်ဤဂေါက်ကွင်းအားဖြင့်အံ့အားသင့်ရလိမ့်မည်. Crans-sur-Sierre ဂေါက်ကွင်းသည် လှပသောရထားခရီး ကွာဂျီနီဗာကနေ, နှင့် Bern.
Zurich မှရထားနှင့်အတူ Wengen ရန်
ဂျနီဗာသည်ရထားနှင့်အတူ Wengen သို့
တစ်ရထားနှင့်အတူ Wengen မှ Bern
ရထားနှင့်အတူ Wengen မှဘေဆယ်
6. အိုင်ယာလန်တွင်ရှုခင်းအကောင်းဆုံးဂေါက်ကွင်း: Old Head Golf Links များ
Old Head Kinsale ၏ထိပ်တွင်ထိုင်နေသည်, သမုဒ္ဒရာတို့ဖြင့်ဝန်းရံထားသည်, Kinsale ဂေါက်ကွင်းကမ်းလှမ်းမှု ရှုခင်းများ, အိုင်ယာလန်နှင့်ဗြိတိန်တို့တွင်အလှပဆုံးမြင်ကွင်းများ.
စိမ်းလန်းသောကျက်စားရာများနှင့်, ကြမ်းတမ်းသောမြေများ, နှင့်ပင်လယ်မြင်ကွင်းများ, အထင်ကရအိုင်ယာလန်ရှုခင်းသည်အံ့သြဖို့မဆုံးပါ. ဒါကြောင့်, Old Head Kinsale ဂေါက်ကွင်းအတွင်းရှိအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောခြံများကြောင့်သင်အလွန်အံ့အားသင့်သွားလိမ့်မည်. သငျသညျတစ် ဦး အပေါ်ဂေါက်သီးကစားလိမ့်မည် 350 သန်းအဟောင်းသဲကျောက်, အချိန်၏သင်တန်းကျော်မြောက်ဘက်ရွှေ့ပြောင်း. ဤသည်ထူးခြားသောဂေါက်ကွင်းဖော့ဆို့ခရိုင်၌တည်ရှိ၏, ရွက်နှင့်အတူ, ငါးဖမ်း, ရေအောက်ငုပ်ခြင်း, အများအပြားကပို ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ ဒီလုံခြုံဆိပ်ကမ်းအတွက်ရေနိူးသည်.
7. ရှုခင်းသာဂေါက်ကွင်းအများစု: Passier ဂေါက်ကလပ် Meran South Tyrol
ဥရောပရှိသာယာလှပသည့်တောင်တန်းများကိုမြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်းများ, Meran ရှိ Passier ဂေါက်ကလပ်သည်အဆင့်မြင့်ဂေါက်သီးသမားများအတွက်မမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုပေးသည်. ထို့အပြင်, တောင်ပိုင်း Tyrol ရှုခင်းများနှင့်အတူ, ကန်, တုတ်ကျင်း, နှင့်အစိမ်းရောင်တောင်ကုန်း, Passier ဂေါက်ကလပ်တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတည်နေရာနှင့်ဒီဇိုင်းရှိသည်.
ထို့အပွငျ, ဂေါက်ကွင်း 18 မြေပြင်ပေါ်တွင်အပေါက်များဖြန့်ထားသည်, စိမ်းလန်းသောကျက်စားရာနေရာများ, ဂေါက်ပိတ်ရက်များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှဂေါက်သမားများကိုဆွဲဆောင်ပါ, သို့မဟုတ် Tyrolian သဘာဝသို့ခရီးရှည်သွားပါ.
ရထားဖြင့် Bolzano မှ Trento
Bologna သို့ Bolzano သို့ရထားတစ်စီးနှင့်
ရထားဖြင့် Bolzano သို့ Venice
8. ဂေါက် Eichenheim: သြစတြီးယား
ထူထပ်သော Alpine သစ်တောများကြားတွင်, ပတ်လည်သစ်သားတဲများ, မြက်ခင်းများနှင့်, Eichenheim ဂေါက်ကွင်းသည်ဥရောပရှိအလှဆုံးဂေါက်ကွင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. လတ်ဆတ်တဲ့ alpine လေ, သဘာဝရနံ့များ, နှင့်သဘာဝဂုဏ်အသရေသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဂေါက်ကစားသမားများကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်. Eichenheim ဂေါက်ကွင်းရှိသည် 18 တွင်း, ကျော်ပြန့်နှံ့သွားသည် 6000 မီတာ.
ဤလှပသောဂေါက်ကွင်းသည်သြစတြီးယားရှိအကောင်းဆုံးဂေါက်ကလပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, ထိပ်တန်းအရာများနှင့်အတူ: ချောင်းဆိုး, အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲအပြီးတွင်အပန်းဖြေရန် indoor နှင့် outdoor ရေကန်များ. မင်းရဲ့ဝါသနာကိုလေ့ကျင့်ဖို့ထူးကဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အတူ alpine ရှုခင်းလိုဘာမှမရှိပါဘူး.
Graz တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူဗီယင်နာမှ Graz
9. Gardagolf ကျေးလက်ကလပ်: အီတလီ
From Manerba-Fort of the palace of Soianoto the hills of Polpenazze and castle, the Gardagolf Club offers scenic views of olive trees and Lake Garda. Gardagolf သင်တန်းရှိသည် 27 တွင်း, ပျံ့နှံ့သွားသည် 110 ဟက်တာ, အံ့မခန်း Lombardy ဒေသ၌.
ဤလှပသောဂေါက်ကွင်းသည် Valtenesi တောင်ကုန်းများဖြင့်ဝန်းရံထားသည်, အဆင့်မြင့်ဆုံးနှင့်အလေးနက်ဆုံးဂေါက်ကစားသူများအားစိတ်ရွှင်လန်းစေသောအမြင်များကိုပံ့ပိုးပေးပါသည်. အနီရောင်သင်တန်းသည် Gardagolf တွင်အလှဆုံးသင်တန်းဖြစ်သည်, ပတ်ပတ်လည်၌ပန်းများနှင့်မြင့်သောသစ်ပင်များနှင့်.
မီးရထားဖြင့် Garda Peschiera ရေကန်သို့ Trento
Bolzano Bozen သည်ရထားနှင့် Garda Peschiera ရေကန်သို့
Bologna ရထားနှင့် Garda Peschiera ရေကန်သို့
ရထားဖြင့် Garda Peschiera ရေကန်သို့ Venice
10. Andermatt ဂေါက်ကွင်း: ဆွစ်ဇာလန်
နောက်ထပ်ဆွစ်ဇာလန်ကျောက်မျက်, Andermatt ဂေါက်ကွင်းသည်ငါတို့ကိုပိတ်သည် 10 ဥရောပ၏အလှပဆုံးဂေါက်ကွင်းများစာရင်း. Andermatt ဂေါက်ကွင်းသည်လှပသောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံချိုင့်ဝှမ်းတွင်ရှိသည်. တောင်တန်းတွေကကောင်းကင်ကိုနမ်းတယ်, စိမ်းလန်းစိုပြေသောတောင်တန်းများ, နှင့်ပို့စကတ်ကဲ့သို့ရှုခင်း.
တည်နေရာသည်အလွန်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်သည်, အာရုံစူးစိုက်မှုအများဆုံးကစားသမားများကိုပင်လှပသော Ursern ချိုင့်ဝှမ်းမှအာရုံလွဲစေနိုင်သည်. Andermatt ဂေါက်ကွင်းကိုသဘာဝ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရန်လှပစွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး eco-friendly ဖြစ်သည်. ဂေါက်ကွင်းများထဲသို့အံ့သြဖွယ်ကောင်းအောင်ထည့်သွင်းထားသောရေစီးများနှင့်ပန်းခင်းများကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်. ရှိပါတယ် 18 ရွေးချယ်စရာတွင်းများ. ဖြည့်စွက်ကာ, ပြင်းထန်သောတောင်လေသည်စိတ်ထက်သန်သောဂေါက်ကစားသမားကိုစိန်ခေါ်သည်, သူတို့ရဲ့ကစားပွဲတက်ဖို့.
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Interlaken မှဘေဆယ်
ရထားတစ်စင်းနှင့် Bern သို့ Interlaken
Lucerne တစ်ရထားနှင့်အတူ Interlaken ရန်
Zurich တစ်ရထားနှင့်အတူ Interlaken ရန်
ငါတို့မှာ တစ်ဦးကရထား Save တစ်သက်မှာတစ်ခါသွားဖူးသောခရီးများအတွက်ဤအစီအစဉ်ကိုကူညီရန် ၀ မ်းမြောက်လိမ့်မည် 10 ဥရောပ၌ရထားလမ်းဖြင့်အလှပဆုံးဂေါက်ကွင်းများ.
ငါတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်“ ဥရောပမှာရှုခင်းအကောင်းဆုံးဂေါက်ကွင်း ၁o” ကိုမင်းရဲ့ site ပေါ်မှာတင်ချင်လား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-scenic-golf-courses-europe%2F%3Flang%3Dmy< - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, မင်းတို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးရထားလမ်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ် https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml.
သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, / ru သို့ / fr သို့ / / es နှင့်အခြားဘာသာစကားများပြောင်းနိုင်သည်.
Bestgolfclubseurope Golf GolfClub GolfCourses mostscenicgolfcourseseurope
ငါအသည်းအသန်စာရေးဆရာပါ, ပြင်းထန်သောတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားနှင့်ဘလော့ဂါ. ဘာသာစကားနှင့်စကားလုံးများသည်အင်အားကြီးမားသောကိရိယာများဖြစ်ပြီးကမ္ဘာသစ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်. ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအခြားအမျိုးသမီးများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ပုံပြင်များမှတစ်ဆင့်ခရီးသွားခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းကိုနှစ်သက်သည် - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
10 ဥရောပရှိ အံ့ဖွယ်မှတ်တိုင်များ
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ဘီယာလမ်းကြောင်း – ရထားဖြင့်ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးဘီယာ
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
Train Travel စကော့တလန်, ဥရောပခရီးသွား
10 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ထူးခြားသောဆွဲဆောင်မှုများ
ထိပ်တန်း3လန်ဒန်မှ အကောင်းဆုံးရထားခရီးစဉ်များ
10 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလှဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များ